.အသားအရေ ကို တောက်ပြောင်စေပြီး အူမကြီးကင်ဆာ နှင့် နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် သဘာဝဆေးနည်း. – Askstyle
.အသားအရေ ကို တောက်ပြောင်စေပြီး အူမကြီးကင်ဆာ နှင့် နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် သဘာဝဆေးနည်း.
၁။ ဗန္ဒါေစ့ လက္ႏွစ္ဆုပ္ခန့္ကုိ ပုမွန္ ဖန္ခြက္တခြက္တြင္ ထည့္၍ တညအိပ္ ေရစိမ္ပါ။
၂။ ေရစိမ္ထားတဲ့ ဗန္ဒါေစ့ကုိစားပါ။
ဗန္ဒါေစ့မ်ားမွာ Mono-unsaturated Fats၊ ပရိုတင္းႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္တို႔ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ သူ႔မွာ ဗီတာမင္ အီးပါ၀င္တာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေစၿပီး Magnesium လည္းပါ၀င္တာေၾကာင့္ ႏွလံုးရုတ္တရပ္ ရပ္တန္႔မႈကို ကာကြယ္ေပးနဳိင္ပါသည္။
ထုိနည္းတူ ဗန္ဒါေစ့မ်ားက အူမႀကီးအတြင္း အစာလႈပ္ရွားမႈကို ကူညီေပးကာ အူမႀကီးထဲမွာ အစာစုပံု ပိတ္ဆို႔ျခင္းကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးတာေၾကာင့္ အူမႀကီး ကင္ဆာ ျဖစ္မႈကို ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါသည္။
ရႊံ ့ေျခာက္ေရာင္အသားအေရကို ဗန္ဒါေစ့ထဲမွာပါတဲ့ ဗီတာမင္အီးကေတာက္ေျပာင္ပါေစနဳိင္ပါသည္။ ထုိအျပင္ ဗန္ဒါေစ့ထဲက fatty acidက သင့္အေရျပားကိုအေရာင္ထြက္ေစ နဳိင္ပါသည္။
ျမန္မာရုိးရာ သဘာ၀ ေဆးနည္းမ်ား ကမၻာတည္သေရြ့ မေျပာက္မပ်က္ တည္တန္နဳိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ရင္း ရွိသည့္အတုိင္း ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါသည္ –
ေလးစားစြာျဖင့္ – နဳိင္ျမန္မာ
Reference: ဖတ္သမွ် မွတ္သမွ်ေလးေတြပါ။
သင့္ကို ငယ္ငယ္က လူႀကီးသူမေတြက ေရစိမ္ထားတဲ့ ဗန္ဒါသီးေစ့ကို စားခိုင္းတာ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ထင္ပါသလဲ။ ေရစိမ္ထားတဲ့ ဗန္ဒါသီးေစ့မွာ သင္ထားတာထက္ပို အာဟာရေတြအမ်ားႀကီးပါ၀င္ပါတယ္။ သူ႔မွာ အေရးႀကီး ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ ဗန္ဒါေစ့ေတြကို ေရစိမ္ခိုင္းတာလဲ ေျခာက္ေသြ႔ေနတဲ့ ဗန္ဒါ အေစ့မွာ အပင္ေပါက္ဖို႔အတြက္ အစိုျပန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ထားတဲ့ အင္ဇိုင္းမ်ားရွိေနပါတယ္။ ဗန္ဒါေစ့ကို ေရထဲမွာ စိမ္လိုက္ရင္ေတာ့ အဲ့ဒီ အင္ဇိုင္းမ်ား မရွိေတာ့ပါဘူး။
ေရစိမ္ထားတဲ့ ဗန္ဒါေစ့မ်ားက အစာေျခရတာ ပိုၿပီး လြယ္ကူေစၿပီး အစာေျခစနစ္ကို အားေကာင္းေစတဲ့ အဟာရဓာတ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ၀င္ပါတယ္။ တစ္ညေလာက္ ေရစိမ္ထားတဲ့ ဗန္ဒါေစ့မ်ားက တျခား ေျခာက္ေသြ႔ေနတဲ့ ဗန္ဒါေစ့မ်ားထက္ပိုၿပီး အဟာရဓာတ္ပိုမ်ားၿပီး လြယ္ကူစြာ အစာေျခႏိုင္ပါတယ္။
ေျခာက္ေသြ႔ေနတဲ့ ဗန္ဒါ အေစ့မွာ အပင္ေပါက္ဖို႔အတြက္ အစိုျပန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ထားတဲ့ အင္ဇိုင္းမ်ားရွိေနပါတယ္။ ဗန္ဒါေစ့ကို ေရထဲမွာ စိမ္လိုက္ရင္ေတာ့ အဲ့ဒီ အင္ဇိုင္းမ်ား မရွိေတာ့ပါဘူး။
ဗန္ဒါေစ့မ်ားက အူမႀကီးအတြင္း အစာလႈပ္ရွားမႈကို ကူညီေပးကာ အူမႀကီးထဲမွာ အစာစုပံု ပိတ္ဆို႔ျခင္းကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးတာေၾကင့္ အူမႀကီး ကင္ဆာ ျဖစ္မႈကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
တစ္ေန႔ကို ဗန္ဒါေစ့ လက္တစ္စုပ္စာ စားေပးရင္ ခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ့ စြမ္းအင္ေတြကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ သူတို႔က Manganese၊ ေကာ့ပါး နဲ႔ Riboflavin ဓာတ္ေတြပါ၀င္တာေၾကာင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္ေတြကို အားေကာင္းေစပါတယ္။
ဗန္ဒါေစ့မ်ားမွာ Mono-unsaturated Fats၊ ပရိုတင္းႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္တို႔ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ သူ႔မွာ ဗီတာမင္ အီးပါ၀င္တာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေစၿပီး Magnesium လည္းပါ၀င္တာေၾကာင့္ ႏွလံုးရုတ္တရပ္ ရပ္တန္႔မႈကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
ဦးေႏွာက္ က်န္းမာေရးကို အားေကာင္းေစမယ့္ အဟာရေတြ ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္ပါတယ္။ Riboflavin နဲ႔ L-Carnitine တို႔လို ဦးေႏွာက္ကို အားေကာင္းေစတယ့္ အဟာရမ်ား ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္ၿပီး ဦးေႏွာက္ စြမ္းေဆာင္မႈကို တိုးတက္ေစကာ အယ္ဇိုင္းမာ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။
ဗန္ဒါေစ့မ်ားကလည္း ေသြးအတြင္း ေကာ္လက္စထေရာကုိလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ဗီတတာမင္ E နဲ႔ ကယ္ဆီယမ္ ဓာတ္မ်ားကလည္း ေကာ္လက္စထေရာဓာတ္ကို ထိန္းညွိေပးပါတယ္။
၁။ ဗန်ဒါစေ့ လက်နှစ်ဆုပ်ခန့်ကို ပုမှန် ဖန်ခွက်တခွက်တွင် ထည့်၍ တညအိပ် ရေစိမ်ပါ။
၂။ ရေစိမ်ထားတဲ့ ဗန်ဒါစေ့ကိုစားပါ။
ဗန်ဒါစေ့များမှာ Mono-unsaturated Fats၊ ပရိုတင်းနှင့် ပိုတက်စီယမ်တို့ ပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သူ့မှာ ဗီတာမင် အီးပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချစေပြီး Magnesium လည်းပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးရုတ်တရပ် ရပ်တန့်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ထိုနည်းတူ ဗန်ဒါစေ့များက အူမကြီးအတွင်း အစာလှုပ်ရှားမှုကို ကူညီပေးကာ အူမကြီးထဲမှာ အစာစုပုံ ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုလည်း လျော့ချပေးတာကြောင့် အူမကြီး ကင်ဆာ ဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ရွှံ့ခြောက်ရောင်အသားအရေကို ဗန်ဒါစေ့ထဲမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်အီးကတောက်ပြောင်ပါစေနိုင်ပါသည်။ ထိုအပြင် ဗန်ဒါစေ့ထဲက fatty acidက သင့်အရေပြားကိုအရောင်ထွက်စေ နိုင်ပါသည်။
မြန်မာရိုးရာ သဘာ၀ ဆေးနည်းများ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မပြောက်မပျက် တည်တန်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ရင်း ရှိသည့်အတိုင်း ရေးသားမှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည် –
လေးစားစွာဖြင့် – နိုင်မြန်မာ
Reference: ဖတ်သမျှ မှတ်သမျှလေးတွေပါ။
သင့်ကို ငယ်ငယ်က လူကြီးသူမတွေက ရေစိမ်ထားတဲ့ ဗန်ဒါသီးစေ့ကို စားခိုင်းတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ထင်ပါသလဲ။ ရေစိမ်ထားတဲ့ ဗန်ဒါသီးစေ့မှာ သင်ထားတာထက်ပို အာဟာရတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ သူ့မှာ အရေးကြီး ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်တွေ အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဗန်ဒါစေ့တွေကို ရေစိမ်ခိုင်းတာလဲ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဗန်ဒါ အစေ့မှာ အပင်ပေါက်ဖို့အတွက် အစိုပြန်မှုများမှ ကာကွယ်ထားတဲ့ အင်ဇိုင်းများရှိနေပါတယ်။ ဗန်ဒါစေ့ကို ရေထဲမှာ စိမ်လိုက်ရင်တော့ အဲ့ဒီ အင်ဇိုင်းများ မရှိတော့ပါဘူး။
ရေစိမ်ထားတဲ့ ဗန်ဒါစေ့များက အစာခြေရတာ ပိုပြီး လွယ်ကူစေပြီး အစာခြေစနစ်ကို အားကောင်းစေတဲ့ အဟာရဓာတ်တွေလည်း အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ညလောက် ရေစိမ်ထားတဲ့ ဗန်ဒါစေ့များက တခြား ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဗန်ဒါစေ့များထက်ပိုပြီး အဟာရဓာတ်ပိုများပြီး လွယ်ကူစွာ အစာခြေနိုင်ပါတယ်။
ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဗန်ဒါ အစေ့မှာ အပင်ပေါက်ဖို့အတွက် အစိုပြန်မှုများမှ ကာကွယ်ထားတဲ့ အင်ဇိုင်းများရှိနေပါတယ်။ ဗန်ဒါစေ့ကို ရေထဲမှာ စိမ်လိုက်ရင်တော့ အဲ့ဒီ အင်ဇိုင်းများ မရှိတော့ပါဘူး။
ဗန်ဒါစေ့များက အူမကြီးအတွင်း အစာလှုပ်ရှားမှုကို ကူညီပေးကာ အူမကြီးထဲမှာ အစာစုပုံ ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုလည်း လျော့ချပေးတာကြေင့် အူမကြီး ကင်ဆာ ဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
တစ်နေ့ကို ဗန်ဒါစေ့ လက်တစ်စုပ်စာ စားပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ သူတို့က Manganese၊ ကော့ပါး နဲ့ Riboflavin ဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို အားကောင်းစေပါတယ်။
ဗန်ဒါစေ့များမှာ Mono-unsaturated Fats၊ ပရိုတင်းနှင့် ပိုတက်စီယမ်တို့ ပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သူ့မှာ ဗီတာမင် အီးပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချစေပြီး Magnesium လည်းပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးရုတ်တရပ် ရပ်တန့်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဦးနှောက် ကျန်းမာရေးကို အားကောင်းစေမယ့် အဟာရတွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ Riboflavin နဲ့ L-Carnitine တို့လို ဦးနှောက်ကို အားကောင်းစေတယ့် အဟာရများ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဦးနှောက် စွမ်းဆောင်မှုကို တိုးတက်စေကာ အယ်ဇိုင်းမာ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုလည်း လျော့ချပေးပါတယ်။
ဗန်ဒါစေ့များကလည်း သွေးအတွင်း ကော်လက်စထရောကိုလည်း လျော့ချပေးပါတယ်။ ဗီတတာမင် E နဲ့ ကယ်ဆီယမ် ဓာတ်များကလည်း ကော်လက်စထရောဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
သူ့မှာ ဗီတာမင်တွေ၊ သတ္တုဓာတ်တွေ၊ Phosphorous ဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် အရိုးကျန်းမာရေးကို အားကောင်းစေပါတယ်။ Phosphorous ဓာတ်တွေက အရိုးနှင့် သွားတွေကို ခိုင်မာ စေပြီး အရိုးပွခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။